आन्दोलन/संघर्ष – Page 13 – JanaSanchar.com
वडाध्यक्ष रोक्कासहितको टोलीद्वारा दलित बस्तीमा आक्रमण, चार जना गम्भीर घाइते, दोषीमाथि कारबाहीको माग
दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्षको टोलीले दलित बस्तीमा पुगेर जथाभाबी आक्रमण गर्दा चार जना सख्त घाइते भएका छन्। चरिकोटस्थित सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेका भुवन मिजार र कमल मिजारको टाउकोमा चोट लागेको छ भने दलित महिला सिता र गिता मिजारको शरिर भरि निलडाम रहेको बताइएको छ। मदिरा सेवन गरि वडा अध्यक्ष राजकुमार रोक्का,मदन..
कोरोनाको महामारीको संकटमा बिना पुर्व सुचना अस्पताल नआउने चिकित्सकमाथि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले कारबाही गरेको छ। सो अस्पतालले करारमा नियुक्त गरेका पाँच जना चिकित्सकलाइ बिना सुचना पछिल्लो ८/१० दिनदेखि अस्पतालमा हाजिर नभएको भन्दै कारवाही गरेको हो। अस्पताल प्रशासनले अस्पतालको रेडियोलोजी विभागमा कार्यरत डा. वरदान वली र डा. तारा..
लकडाउनको उल्लंघन गर्दै ‘बान्नीकी चैतली’ मेला सञ्‍चालन गरेको आरोपमा प्रहरीले बझाङको छविसपाथीभेरा गाउँपालिकाका चार जना वडाध्यक्ष र मन्दिरका पुजारीसहित नौ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङको हिरासतमा राखिएका वडाध्यक्षहरुमा छविसपाथीभेरा २ का वडाध्यक्ष विकास अयडी, ३ का वडाध्यक्ष केशवराज जोशी, वडा नं ४ का अध्यक्ष अमर..
विश्व कोरोन भाइरस संक्रमणबाट तसित बनिरहेको छ। अझ भन्नु पर्दा कन्चनपुर र कैलालीमा समेत कोरोना भाइरस संक्रमित एक व्यक्ति व्हेतिएका छन्। जनतामा भय र त्रासमा छन्। तर लकडाउन घोषणा गरेको समयमा दार्चुलाको लेकम गाँउपालिका–६ का वडाध्यक्ष कमलापती मिश्रले भने कार्यालयमै जाँडपाटी गरेकी छिन। स्थानीय दिपेन्द्र साउदका अनुसार वडाध्यक्ष..